မော်တော်ယာဉ် LED display မျက်နှာပြင်၏အများအပြားအားသာချက်များ - မိုးလုံလေလုံပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်ဗီဒီယို display မျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သူ
မော်တော်ယာဉ် LED display မျက်နှာပြင်၏အများအပြားအားသာချက်များ
ယာဉ်တက္ကစီ LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်သည်အချိန်နှင့်တပြေးညီပါ ၀ င်သည်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, mobility နှင့်ကြီးမားသောစွမ်းရည်. အချို့ရှိသည်သောအသုံးပြုသူများသည် “အမြင်အာရုံပင်ပန်းနွမ်းနယ်” အငြိမ်ကားတစ်စီးဘတ်စ်ကားအီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင် LED သည်, ဤနည်းလမ်းသစ်ကိုအသုံးပြုသူများနှစ်သက်သည်.
ဘတ်စ်ကား LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်ကိုဥပမာအဖြစ်ယူခြင်း, ၎င်းသည်ခရီးသည်များကိုအရေးကြီးသောခရီးသွားလာရေးသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးနိုင်သည်, လမ်းကြောင်းသတင်းအချက်အလက်, စသည်တို့. ဖြည့်စွက်ကာ, အဆိုပါကြော်ငြာအကျိုးသက်ရောက်မှုထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်.
အချို့သောတက္ကစီယာဉ်မောင်းများကမကြာခဏဆိုသလိုသူတို့ကစိုးရိမ်နေကြသည်ဟုပြောကြသည် ဘတ်စ်ကားအီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင် LED ကားကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေတယ်. သင်စိုးရိမ်ရန်မလိုပါ. ယေဘူယျအားဖြင့်, ဒါဟာတက္ကစီပေါ်ကိုက်ညီ monochrome ကဲ့သို့ဖြစ်၏, အရာအတော်လေးသေးငယ်သည်နှင့်ဖြစ်စဉ်ကိုသိပ်ရှုပ်ထွေးမဟုတ်ပါဘူး. ယေဘုယျအားဖြင့်, အရောင်အပြည့်အစုံပါသောကားမျက်နှာပြင်ကို Iveco ကဲ့သို့ကားဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်, အရာထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့အများအပြားပြproblemsနာများကြာပါသည်. ပထမ, လမ်းမျက်နှာပြင်နှင့်အခြားအချက်များကြောင့်မျက်နှာပြင်ခန္ဓာကိုယ်၏ shock shock ကိုလိုအပ်သည်; ဒုတိယအချက်, အပူလွန်ကျူး၏ပြisနာလည်းမရှိ. တစ်ခုမှာ display screen ၏အစိတ်အပိုင်းများသက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်းဖြစ်သည်. ဒုတိယအချက်, အဆိုပါရထားအတွက်အပူချိန်အရမ်းမြင့်မားသည်. ထို့ကြောင့်, အပူလွန်ကျူးအစီအစဉ်အထူးအရေးကြီးပါသည်, ပါဝါထောက်ပံ့ရေးနှင့်လေကြောင်းလည်ပတ်မှု၏ပြproblemsနာများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား.
မြို့တွင်းရှိဘတ်စ်ကားသည်အများပြည်သူသွားလာရေးအတွက်အဓိကနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်, တစ်နေ့လျှင်တစ်သန်းကျော်ခရီးသည်နှင့်အတူ. လူအများအပြားကိုသယ်ဆောင်လာသည်, ပြီးနောက် “အားလပ်ချိန်” ဘတ်စ်ကားပေါ်တွင် ၁၀ မိနစ်ကျော်ခရီးသည်သည်ဖြည်းဖြည်းနှင့်ပျင်းစရာကောင်းသည်. သတင်းကိုထုတ်လွှင့်ရန်၎င်း၏ရှေ့တွင်စီးသောရောင်စုံ display screen တစ်ခုရှိပါက, အားကစား, ဖျော်ဖြေရေး, ရာသီဥတု, ကြော်ငြာသတင်းအချက်အလက်, စသည်တို့, ဒီလိုမျိုးတက်ကြွတဲ့ “ပြည့်ပြည့်စုံစုံ” စာဖတ်သည့်မီဒီယာသည်ခရီးသည်များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအများဆုံးရရှိနိုင်ပြီးကောင်းမွန်သောကြော်ငြာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိနိုင်သည်.
အငှားယာဉ်များအတွက်, On-board မျက်နှာပြင်သည်ကားကိုမထိခိုက်ပါ, ဒါပေမယ့်လည်းကြော်ငြာဝင်ငွေရနိုင်သည်. ဘာလို့မဖြစ်ရမလဲ? ဖြည့်စွက်ကာ, GPS LED ကားမျက်နှာပြင်သည် GPS ကို အသုံးပြု၍ ယာဉ်ကိုရှာဖွေနိုင်သည်, နှင့်တည်နေရာပြန်သွားပါ, မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုယာဉ်၏တည်နေရာကိုကျွမ်းကျင်ရန်အငှားယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုစင်တာသို့မဟုတ်ဘတ်စ်ကားပေးပို့သည့်စင်တာကိုအထောက်အကူပြုသည်, အချိန်နှင့်တပြေးညီအစီအစဉ်ဆွဲခြင်း, ကုန်ကျမှုလျှော့ချခြင်းနှင့်ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုရည်မှန်းချက်လျှော့ချခြင်း.
အစိုးရအရာရှိများနှင့်ရဲယာဉ်များအတွက်, ဦး ဆောင်မော်တော်ယာဉ်မျက်နှာပြင်ကြီးမားသောသိုလှောင်မှုစွမ်းရည်ရှိပါတယ်, အရာနေ့စဉ်ကြော်ငြာအယူခံနိုင်ပါတယ်, သတင်း, မူဝါဒများ, လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်စည်းမျဉ်းများ, အများပြည်သူဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက် (ထိုကဲ့သို့သောရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်အဖြစ်), မြို့ပြယဉ်ကျေးမှု, ပြသမှုမျက်နှာပြင်မှတဆင့်အများပြည်သူထံအသွားအလာနှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသည်. ၎င်း၏အများပြည်သူသက်သာချောင်ချိရေးအထူးသဖြင့်ထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်, ၎င်းသည်အစိုးရ၏လက်ရာဖြစ်ပြီးမြို့ပြယဉ်ကျေးမှု၏ပြတင်းပေါက်ဖြစ်သည်. ဖြည့်စွက်ကာ, တစ် ဦး ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုရင်ဆိုင်ရသည့်အခါ, GPS သည်အချိန်မီသတင်းပေးနိုင်သည် 110 ယာဉ်မောင်းအနေအထားနှင့်နှိုးစက်ယာဉ်လမ်းကြောင်း, နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာ, ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာများကိုပြသရန်ပြတင်းပေါက်အပြင်ဘက်ရှိ LED ကားမျက်နှာပြင်သည်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် “ကြှနျုပျဒါးပွတိုကျခံရတယျ, ကျေးဇူးပြုပြီးရဲကိုခေါ်ပါ”, ၎င်းသည်တရားမ ၀ င်ရာဇ ၀ တ်မှုများအပေါ်ထိရောက်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးနှိမ်နှင်းနိုင်သည်.